Marka hore xumaan marka xigta wanaag: 10-atoore oo door xumaan ah ku bilaabeen filimada kadibna door wanaag ah kusoo idleeyeen (+sawiro) – Filimside.net
Marka hore xumaan marka xigta wanaag: 10-atoore oo door xumaan ah ku bilaabeen filimada kadibna door wanaag ah kusoo idleeyeen (+sawiro)
Dhinac walbo ayaa laga eegaa doorarka ay qaataan ama sameeyaan atoorayaasha caanka ah ee Bollywood-ka ah madaama bandhigyadooda kala duwan qiimeyn gaar ah lagu sameeyo.
Waxaan idiin heynaa 10-atoore oo aflaanta qaar ku bilaabeen door xumaan ah balse filimada dhamaadkiida ama qaybaha dambe isku badalayaan dad wanaagsan ama door wanaagsan.
Hadaba hoos kaga bogo 10-atoore oo filimada qaar door xumaan ah waqtiga hore ku jilayaan waqtiga dambena door wanaag ah qaateen:
1. Munna Bhai MBBS: Sanjay Dutt wuxuu filimkaan ku matalaa gaangester lagu magacaabo Munna, laakiin markii dambe qof wanaagsan dhaqtar ah dadkana si maskixiyan u caawinaayo.
2. Dilwale: Shah Rukh Khan wuxuu filimkaan ku jilaa doorka Raj kaasi oo marka hore noloshiisii gaangester ahaa balse markii dambe garaash furanaayo nolol caadi ahna bilaabayo marka uu jaceylkiisa waayo.
3. The Legend Of Michael Mishra: Arshad Warsi wuxuu ku jilaa gaangester oo markii dambe shaqadii xumeyd kaga tunaasulaayo jaceylkiisa Aditi Rao Hydari weliba diyaar u ah 500-sano xarig inuu muteesto jaceyl dartiisa!
4. Ghulam: Aamir Khan marka hore tuug iska yar oo xariif ah ayuu jilaa laakiin noloshiisa wuxuu badalaa marka gabadha ay saaxiibada yihiin walaalkeed la dilo.
5. Hero: Jackie Shroff, burcadka uu u shaqeeyo ayaa u sheegayo ama ku amraayo inuu af duubto gabadha Radha (Meenakshi Sheshadri) uu dhalay askari si uu kaga aarguto, laakiin markii dambe jaceyl ayuu u qaadaa gabadii uu afduubtay wuxuuna isku badalaa qof wanaagsan.
La Soco Qaybta Labaad Maqaalkaan Xiisaha Badan……………..
Waxaa Aqrisay 579